I-78 ifile kwaye inyuka eNtshona Sulawesi, eIndonesia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-78 ifile kwaye inyuka eNtshona Sulawesi, eIndonesia
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • Utyalo mali • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba ezahlukeneyo
Inyikima enkulu eNtshona Sulawesi eIndonesia ishiye abantu abangama-78 beswelekile. Eli nani linokunyuka.
Uninzi alunamakhaya. Abasemagunyeni bazama ukufumana isiphatho kwimeko eqhubekayo.
Inani lokufa kwinyikima enamandla eNtshona Sulawesi liye laya kuma-78, abasemagunyeni bathi ngoMvulo, amawaka ashiyeke engenamakhaya njengoko abahlanguli bebaleka befumana umntu osaphila phantsi kweentaba zenkunkuma.
Izibhedlele zigutyungelwe ngamakhulu abantu abonzakeleyo emva kwenyikima engange-6.2-ngeeyure zokuqala zangoLwesihlanu, ibangele ukuphaku phakathi kwabahlali besiqithi, esihlaselwe yinyikima yetsunami ka-2018 eyabulala amawaka. Abahlanguli bachithe iintsuku bethatha izidumbu phantsi kwezakhiwo ezishwabeneyo eMamuju, isixeko esinabantu abayi-110,000 kwiphondo laseNtshona Sulawesi, apho isibhedlele sathi tyaba saza isakhiwo sendawo ekuthengiswa kuyo sahlala singamabhodlo. Abanye babulawa emazantsi esixeko.
Inani lokufa elisemthethweni lisenokunyuka. Imifanekiso yasemoyeni evela esixekweni esiselunxwemeni lolwandle ibonakalise izakhiwo ezincitshisiweyo zaya kubunzima obuxineneyo bentsimbi eguqulweyo kunye neziqwengana zekhonkrithi, kubandakanya iofisi yegosa lommandla.
Kwakungacacanga ukuba mangaphi na amanye umzimba anokuba phantsi kobutyobo, okanye ukuba bekukho umntu osabambekile kodwa usaphila ngaphezulu kweentsuku ezimbini emva kwentlekele. Abasemagunyeni khange banike nani ukuba bangaphi abasindileyo abasindisiweyo.
Izidumbu zafunyanwa phantsi kwesibhedlele esasidilika, ngelixa amalungu amahlanu osapho lwabasibhozo afunyanwa eswelekile kumabhodlo aqinileyo ekhayeni labo.
Amawaka ashiyeke engenamakhaya ngenxa yenyikima aye kwiindawo zokuzimela - uninzi lwazo lungaphaya kweentente ezigutyungelwe ngeteyile ezizaliswe ziintsapho zizonke - ezazibethwa zizantyalantyala zemvula.
Bathe ukuphelelwa kukutya, iingubo kunye nolunye uncedo, nanjengoko izinto ezingxamisekileyo zikhawulezisiwe zaya kwingingqi eneengxaki. Uninzi lwabantu abasindileyo abakwazi ukubuyela kumakhaya abo atshatyalalisiweyo okanye boyika kakhulu ukubuyela umva besoyika itsunami ebangelwe kukunyikima komhlaba, okuqhelekile emva kwenyikima zomhlaba ezinamandla.
Kwilizwe elingummelwane iKalimantan, icandelo laseIndonesia kwisiqithi saseBorneo, ubuncinci abantu abahlanu babhubhe kwizikhukula ezinzima ngelixa uninzi lwalungekho, ngokwengxelo, ngelixa izikhukula zibulale abantu abahlanu eManado, amakhulu eekhilomitha kumantla wentlekele yenyikima eSulawesi .
Ukwehla komhlaba kwiNtshona yeJava kubulale i-28 ubuncinci kule veki njengoko ixesha leemvula lithe gqwagqwa kukubandezeleka kwiindawo ezithile zeli lizwe. Kwimpuma esempuma yesiqithi saseJava, iNtaba iSemeru yagqabhuka emva kwexesha ngoMgqibelo, yadubula uthuthu kunye nenkunkuma malunga neekhilomitha ezi-4.5 esibhakabhakeni, njengoko udaka olubomvu oluqaqambileyo luyehla kumngxunya walo.